August 21, 2019 - Myitter
ကျွန်မ၏ တင်ပါးကို ယားလွန်း၍ ကုတ်မိလိုက်သောအခါ…
August 21, 2019 Myitter 0
ကျွန်​မ၏ တင်ပါးကို ယားလွန်း၍ ကုတ်မိသည်။ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဘေးမှာရှိသည်။ တစ်ယောက် က မော်လီ တစ်ယောက်က ခင်မြရည် ဖြစ်သည်။ ကျမ ယားလို့ တင်ပါးကုတ်မိတဲ့ အခါ သူငယ်ချင်း မော်လီက ဓာတ်ပုံ ဖျတ်ခနဲ ရိုက်ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့…၊ ပလွတ် ဆိုပြီး […]
တနေ့ တမျိုး မရိုးရတဲ့ လူလိမ်တွေရဲ့ အွန်လိုင်း လိမ်နည်းအသစ်
တနေ့ တမျိုး မရိုးရတဲ့ လူလိမ်တွေရဲ့ အွန်လိုင်း လိမ်နည်းအသစ် ကျွန်မကိုယ်တိုင် အလိမ်ခံရလို့ တစ်ခြားသူတွေကိုယ့်လိုမဖြစ်အောင်ဒီစာကိုရှက်ရှက်နဲ့ပဲရေးလိုက်ရပါတယ် အလိမ်ခံရတယ် ဆိုတာထက် နာမည်အလွဲသုံးစားလုပ်ခံရတယ် ဆိုရင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် ဇူလိုင်လတုန်းက ကျွန်မရဲ့ ဗိုင်ဘာ အကောင့်ထဲကို လူတစ်ယောက် massage လာပို့ပါတယ် သူက အသေးစား အလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ငွေချေးပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း […]
MMA ပြိုင်ပွဲတွေကနေ နိုင်ပွဲတွေယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ကိုဆောင်နေတာကတော့ MMA ဖိုက်တာ အောင်လအန်ဆန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတိုင်းနီးပါးမှာ နိုင်ပွဲတွေယူပြီး ပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်အောင်ဖန်တီးပေးတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ပွဲတိုင်းမှာ နိုင်ပွဲတွေယူပေးပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်နေတာပါ။ သူ့ကြောင့်လည်း MMA ပြိုင်ပွဲတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပရိသတ်တွေပိုအားပေးလာကြပြီး ကစားသမားတွေလည်းထွက်ပေါ်လာတာပါ။အောင်လအန်ဆန်ကတော့ သူ့ရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် လည်း […]
စင်ကာပူ ရေ ဟိုးတစ်ချိန် တုန်းကတော့ငါတို့ကို တူအောင် တုမယ်ဆိုတဲ့မြို့လေဆိပ်မှာ ကတည်းက စည်းကမ်းကျတဲ့ အလှကိုငေး၊ နေစရာတွေ ငေး၊နားစရာတွေ ငေး….
စင်ကာပူ ၁။ဟိုးတစ်ချိန် တုန်းကတော့ငါတို့ကို တူအောင် တုမယ်ဆိုတဲ့မြို့လေဆိပ်မှာ ကတည်းက စည်းကမ်းကျတဲ့ အလှကိုငေး၊ နေစရာတွေ ငေး၊နားစရာတွေ ငေး။ မလိုသူတွေက ပွဲစားမြို့လေးတဲ့ဒါပေမဲ့ သူဟာကမ္ဘာလေးတစ်ခုပါဒီကမ္ဘာလေးကို အစစ်အတုခွဲပြီး အလှရှာမဲ့မြန်မာအဖေနဲ့ သမီးကို မသင်္ကာတဲ့ မျက်လုံးနဲ့။ ၂။ရန်ကုန်ရေ နင်ဘယ်လောက်ပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီလဲငါတို့ မပြောရဲတော့ဘူးတစ်နေ့တစ်လံပေါ့ စင်ကာပူရယ်သစ်ပင်တွေ ပန်းတွေက စနစ်တကျပွင့်ပြီးစနစ်တကျ […]
မော်လမြိုင်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေက ဆိုလာနဲ့ မောင်းနှင်နိုင်မယ့် ကားတစ်စီးကို တီထွင် (ရုပ်သံ) Zawgyi မော်လမြိုင်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေက ဆိုလာနဲ့ မောင်းနှင်နိုင်မယ့် ကားတစ်စီးကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ “ဒီကားကို လုပ်ဖို့ အချိန်အားဖြင့် (၃) လလောက် ကုန်ခဲ့ပါတယ်။ အသုံးစရိတ်ကတော့ သိန်း (၃၀) […]
ရန်ကုန်မြို့ ကားတစ်စီးပေါ်မှ လက်နက်ခဲယမ်းများ ဖမ်းမိသည်ဆိုသည်မှာ လျှိုဝှက်လေ့ကျင့်မှုသာ ဖြစ်
ကားတစ်စီးပေါ်မှ လက်နက်ခဲယမ်းများ ဖမ်းမိသည်ဆိုသည်မှာ လျှိုဝှက်လေ့ကျင့်မှုသာ ဖြစ် ကြည့်မြင်တိုင် သရက်တော (၄) လမ်းတွင် ကားတစ်စီးပေါ်မှ လက်နက်ခဲယမ်းများ ဖမ်းမိသည်ဆိုသည်မှာ လျှိုဝှက်လေ့ကျင့်မှုသာ ဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် လက်နက်ခဲယမ်းများ သယ်ဆောင်လာသော ယာဉ်တစ်စီးကို ဖမ်းဆီးရသည်ဟူသော သတင်းများသည် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ကမာရွတ်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှူး […]
အသည်းကွဲ ပြီး တစ်နှစ်ပြည့် အတွေ့အကြုံတွေ ကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ အချစ်ကြီး ချစ် ခဲ့ဖူးသူ ၊ နှစ်အတော်ကြာအောင် ချစ်သူလမ်းခွဲခဲတဲ့တိုင် သစ္စာမပျက်ခဲ့သူတွေထဲမှာ ပန်ကိတ်ဒါဒါလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်ကိတ်တစ်ယောက် အဆိုတော် ရွှေထူးရဲ့ ရုတ်တရက်လမ်းခွဲမှုကို ခံရပြီးချိန်မှာတော့ လမ်းတွေပျောက်သွားသလို ခံစားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေထူးတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကျသွားခဲ့သည့်တိုင် […]
စူဠလိပ်အား ရေနစ်သတ်ရန် အကြံပေးပုဏ္ဏားနှင့်တူသော မြန်မာပြည်ဖြစ်နေပြီလား..
ရှဲရှဲနီပါ မြန်မာတို့ရွာနံဘေးက ကားလမ်းမှာကုန်စိမ်းကားတစ်စီး ဘီးပေါက်လို့ကားဆရာကားအောက်ဝင် နတ်ဖြုတ်နေတုန်းဖြတ်သွားဖြတ်လာ လူတစ်ယောက်ကကားဆရာအလစ်မှာ နတ်တစ်လုံးကိုကောက်ယူလို့သံတိုသံစ၀ယ်တဲ့ဆိုင် သွားရောင်းတာ ၁၅၀ တောင်ရသတဲ့။ သူ့အတွက်တော့ကွမ်းယာဆေးလိပ် တစ်နေ့စာ ဖူလုံသွားပေမဲ့ပုံစံတူနတ်ရှာမရလို့ ကုန်စိမ်းကားကတော့အဲဒီနေရာမှာ ၂ ညတောင်အိပ်လိုက်ရသတဲ့။ကုန်စိမ်းတွေလည်း အချိန်မှီ ဈေးမရောက်တော့ပုပ်ကုန်ပြီးအမှိုက်ပုံ ရောက်သွားကြတယ်။ကုန်စိမ်းသည်တွေလည်း ရှုံးလိုက်တာ ခွက်ခွက်လန်ဘဲ။ တို့ရွာနားက လယ်ကွင်းမှာဘိုဒူဇာတစ်စီး မြေတူးရင်းမိုးကျလာလို့နောက်နှစ်အတွက် မပြန်တော့ဘဲနီးရာလယ်သမား […]
ရှုခင်းသာအိမ်ရာ လူသတ်မှုတရားခံကို သတင်းပေးသူအား ဆုငွေ ဆယ်သိန်းချီးမြှင့်မည်
ရှုခင်းသာအိမ်ရာ လူသတ်မှုတရားခံကို သတင်းပေးသူအား ဆုငွေ ဆယ်သိန်းချီးမြှင့်မည် ရန်ကုန်တိုင်း သာကေတမြို့နယ် ရှုခင်းသာအိမ်ရာဝင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သောလူသတ်မှုဖြစ်စဉ်တွင် တရားခံကို ငါးလခန့် ကြာမြင့်သည့်တိုင် မဖမ်းဆီးနိုင်သဖြင့် တရားခံရှိသည့်နေရာအား သတင်းပေးသူကို ဆုငွေကျပ် ၁ဝ သိန်းချီးမြှင့်မည်ဟု ဆုကြေးထုတ်ထားကြောင်း သေဆုံးသူ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ပြောသည်။ မတ် ၁၈ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းက ရှုခင်းသာအိမ်ရာအတွင်း […]
လာရှိုးဈေးနားဖြစ်စဉ်တခုပါ စစ်ကားတွေ ဘေးကိုဒေသခံ လူအုပ်ကြီးကပ်လာတာပါစစ်ကားတွေကလဲ ချက်ချင်းထွက်ဖို့ပြင်နေပါပြီ နီးစပ်ရာကုန်စုံဆိုင်တွေက ပစ္စည်းတွေ ကုန်ရောပဲသူထက်ငါ အလုအယက်ပါ အစီအစဉ်မရှိဖြစ်သွားပုံရပါတယ် ဆိုင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်း မှန်သမျှ လူအုပ်ကမပြီးနောက်မှရှင်းမယ်နော်လို့ အုပ်စုလိုက်ပြောပြီးသူထက်ငါ အလုအယက်ယူပေးနေတာပါပဲ စစ်ကားတွေနောက်လိုက်ပေးကြတာကိုကနဲနဲတော့သရုပ်ပျက်သွားတယ် တို့…ပြီးရင် ရှင်းမယ် ဟေ့…. ပြီးရင်ပေးမယ် ဝေ့…. ကားမထွက်ခင်လေးပေးချင်လို့ ဝေ့…. တိုင်းရင်းသားစကားသံ ဝဲဝဲတွေ […]